China Taratasy vy eo amin'ny tampina mpanondrana sy Product | Evergreen
Taratasy vy eo amin'ny tampina
Matetika chenille tampina dia novokarina mba handravaka ny varsity palitao, na ny fanatanjahan-tena ekipa loka. Izy ireo zavatra nataon-chenille kofehy mifototra amin'ny iray na roa sosona ny nahatsapa afara. Ny fitambaran'ny chenille sy ny peta-kofehy matetika ampiharina amin'ny fanatanjahan-tena tampina. Evergreen Badges no nanao ny orinasa mpamokatra entana, taratasy sy ny kalitaon'ny chenille mofo sy divay, izay namboarina manokana araka ny tiany sy ny famolavolana sizing. Ny chenille tampina dia vita amin'ny volon'ondry 80%, 20% nylon ho nanampy mateza ....
Matetika chenille tampina dia novokarina mba handravaka ny varsity palitao, na ny fanatanjahan-tena ekipa loka. Izy ireo zavatra nataon-chenille kofehy mifototra amin'ny iray na roa sosona ny nahatsapa afara. Ny fitambaran'ny chenille sy ny peta-kofehy matetika ampiharina amin'ny fanatanjahan-tena tampina. Evergreen Badges no nanao ny orinasa mpamokatra entana kalitaon'ny chenille Taratasy S ary ny mofo sy divay, izay namboarina manokana araka ny tiany sy ny famolavolana sizing. Ny chenille tampina dia vita amin'ny volon'ondry 80%, 20% nylon ho nanampy mateza. Noho ny tsy manam-paharoa kofehy safidy, ny tampina dia mampiavaka araka ny faran 'izay tsara tarehy mazava 3D.
Onsite digitizing tsy ampy mamela antsika mba maka tahaka na fanao-hamorona varsity taratasy isaky ny ny fangatahanao. Na ny taratasy dia ho an'ny sekoly, na orinasa lehibe fotsiny ho anao, dia afaka mamorona azy.
Previous: palitao tampina
Next: Taratasy tampina for palitao
Iron On Letter chenille Patches
Taratasy chenille Patches
Chenille amboradara tampina
Manjaitra amin'ny tampina ny palitao
Custom palitao tampina
peta-kofehy Badge, Hook Ary Loop mpanenona Badge , Chenille Letter , Chenille Varsity Letter , Chenille Patch Letters , Chenille Varsity Letter T Patch , rehetra Products- 粤 ICP 备 18108880 号 -1